‘ज्यापु समाजको मंगलबजारमा बृहत साँझ’ | शहरबाट शब्दहरु
« मामाभान्जी छुरा र सितारामका कुरा
कति छ मेरो तलब ? »
‘ज्यापु समाजको मंगलबजारमा बृहत साँझ’	२५ पुस, २०७१ तद्अनुसार ७ जनवरी, २०१५ (शुक्रबार) । ज्यापु समाजले बिहिबार दिउँसो मेरो डेक्समा एउटा विशेष पत्र पु¥याए, पत्रमा ‘गेष्ट’ को ट्यागसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम र नेवाः भोजको निम्तो । कार्यालयको काम सिध्याएर निस्किने तरखर गर्दा करिब ६ बज्न लागेको थियो । हामी (म र सुनिता) कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तयारी हुँदैगर्दा फेसबुकमा स्टाट्स अपलोड भयो । तर चिसो र खोकीका कारण अन्त्यमा उनी नजाने निधो गरिन् । र, म नमिठो पारामा मंगलबजारतिर हानिएँ ।
जाँदै गर्दा ताम्रकार समाजका अध्यक्ष रविन्द्रराज ताम्रकारलाई फोन गरेर सँगै जाऊ भनेर प्रस्ताव राखे । प्रस्ताव पारित भयो, हामी मंगलबजार नजिकैको हनुमान उभिएको ठाउँनिर तीन दाजुभाईको भेट भयो । प्रवेश ढोकानिर भेटिए नेपाल समाचारपत्रका सुनिल महर्जन, लहनाका सुरेन्द्र र नृपेन्द्रजी । साथमा अन्य दुई मित्रहरू पनि थिए । त्यसपछि एक हुल विशेष पास देखाएर हामी भित्र पस्यो ।
मंगलबजार पस्ने बित्तिकै हामी दंग भयौं । निम्तोपत्रमा बृहत लेखिएको थियो । साँच्चिकै बृहत देख्यौं । हामी साथीहरू यताउता नियाल्दै एकस्थानमा जम्मा भएका थियौं । सगुनका रूपमा वासः (रक्सी) र योमरीबाट खान शुरू गर्यौं । कार्तिक डबलीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल्दै थियो । दरबार घुम्ने बाटोमा तीन लहरमा नेवारी भोजका लागि लश्कर बसेका थिए । हामी योमरी र वासः स्वादमा चियर्स गरिरह्यो । त्यहाँ साथीहरू थपिँदै गए ।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलाल देखिए हुलमा । तयारी पोशाकका अध्यक्ष विरेन्द्र शाक्यकी पत्नीले योमरीले स्वागत गरेपछि दंग देखिए दुलाल । म सँगै साक्षी हुँदै बसे । त्यसपछि भूपेन्द्र राजोपाध्याय टुप्लुक्क । अनि रामशरण घिमिरे र साथमा (चिन्न सकिएन) सँग हात मिलाएर आज प्रकाशित अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित सहकारी सम्वादका लागि धन्यवाद दिइहाले । अनि यहीँ ७ दाजुभाईको भेटमा भूपेन्द्रले बचत संघमा फेरि नेतृत्व लिन भेटघाटमा व्यस्त रहेका घिमिरेलाई देखाउँदै भने, ‘हामी त उहाँलाई जिताउन दौडादौड गरिरहेका छौं ।’ संघका दुलाल ‘हो त, हो त’ भन्दै प्रतिक्रिया दिए । भोजमा समेत सहकारी नेतृत्वको चर्चा धेरै बेर चल्यो । यतिखेर मेरो मनमा अर्का प्रत्यासी रामशरण बस्नेत कहाँ होलान् ? भन्ने फरक कोण चलिरह्यो ।
फोनमा सम्वादमा निकै आत्मिय चिनाजान भएकाहरूसँग यही माहौलमा प्रत्यक्ष भेट भयो । कार्तिक डबलीका अग्रपक्तिमा फेरि देखिएका रविन्द्रजीसँग फेरि बसे । उनले कानमा फुसफुसाए, ‘कति भीड जम्मा गरेको, कति एकताबद्ध छ हगि ?’ कार्यक्रममा यताउता बरालिँदा चिरिबाबु महर्जन, सरिता महर्जन, नारायण अवाले, कृष्ण अवाले, प्रेम महर्जन, दिपक महर्जन, बाबुराजा ज्यापु, श्रवण महर्जनलगायत धेरैसँगको भेट ताजगीमय भयो । यही निम्तोमा दानदाश श्रेष्ठ र फोटोकर्मी सानु महर्जनसँग धेरैपछि भेट भयो ।
यतिखेर सम्म रविन्द्रजी हराए । सुनिल र अन्य साथीहरूपनि हराए । स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेलको फोन बज्यो । सम्भवत उहाँपनि त्यही कार्यक्रममा थिए । स्वर राम्ररी सुनिएन । ‘नमस्ते नमस्ते, ‘कहाँ हो कहाँ हो’ को सम्वादमै हामी एकै ठाउँमा छौ भन्ने पुष्टि भयो ।
भोजमा केही गुप्तचर साथीहरूसँग पुर्नमिलन भयो । नागरिक तथा उड्ड्नमन्त्री फर्किरहँदा हाम्रा पत्रकार मित्र सुनिलजी हातमा बोकेको वासः फ्याँकेर हाइजम्प गर्दै मन्त्रीतिर मोहित हुन पुगे । हामीले फर्किने बेला भन्यौं, ‘मन्त्री भेट्न किन यसरी दौडेको ?’ उनले सुनेपनि नसुनेझैं गरे र टारे ।
ललितपुरका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा एसीई टेलिभिजनका अध्यक्ष समेत रहेका अजरमान जोशीको न्यानो स्वागतपनि सम्झिन लायकको भयो । आत्मियतापूर्वक भलाकुसारी गर्दै हामी भिमसेन मन्दिर जाँदै गर्दा उनले आफ्ना टेलिभिजनकर्मीलाई यसरी यो खिच्ने भनेर सम्झाउन भ्याँए ।
जाँदै गर्दा सुमेरू गु्रपका हस्तीहरू अग्रपक्तिमा देखिए । देख्ने बित्तिकै सुमेरू ग्रुपका अध्यक्ष भरत महर्जनले बायाँ हात दिएर न्यायो अभिवादन गरे । त्यसपछि रमेश महर्जन, होमराज दाहाल, विनोद अर्यालगायतसँग यस्तै शैलीमा भेट भयो । हिजोआज सुमेरू ग्रुपको सामाजिक कार्यप्रति बाक्लो उपस्थिती हुन थालेको छ । अघिल्लो एक कार्यक्रममा पनि यही हुल सम्मानपूर्वक देखिएको थियो । यस्तै सोचिरहँदा सुमेरूका प्रबन्ध निर्देशक दाहालले भने, ‘जय ज्यापु ।’ छुटिने बेलामा समेत दाहालले आत्मियता साथ भन्दै थिए, ‘तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ । तर हामीले चाहेको साथ दिन सकिएको छैन । मैले भने, ‘उर्जा दिनुभएको छ नी ।’ उनले थपे, ‘उर्जामय साथ सुमेरूको सदा रहनेछ ।’
वासः हातमा लिएर सिद्धिनरसिंह मल्लको स्तम्भमुनि एक्लै उभिएका ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष मृगेन्द्र प्रधानसँग चीनियाँ शैली ‘ध्याम्पे’, जिल्ला बचतका आगामी नेतृत्वका लागि तयार रहेका रामशरण घिमिरेले मागेको आर्शिवाद, ज्यापु समाजका विशेष पदाधिकारीले अंगालो मारेर गरेको न्यानो स्वागत ऐतिहासिक रहेनछ सदासदा ।
सांस्कृतिक कार्यक्रममा मदनकृष्ण र हरिवंश देखिए । आशिष्मा नकर्मीपनि देखिए । नाच र संगीतहरू गुञ्जायमान बनेको मंगलबजारभित्र अब भोजको स्वाद लिन हामी लहरबद्ध मिलाइएको सुकुलमा बस्यौं । मजाले खायौं । फर्किने तरखर हुँदै गर्दा किरण महर्जन र दिपक महर्जनले फेरि कुनातिर लिएर गए, ‘एकपटक सुविनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ’ भन्दै सलिचाः (रक्सी पिउने सानो माटोको भाँडो) चियर्स गर्दै छुट्टियौं ।
घरमा पु¥याउने क्रममा बाटैभरि सुनिलले सहकार्य गर्नुपर्छ है भन्दै थिए । राम्रोसँग गए, राम्रैसँग आए । कार्यक्रममा विशेष निम्तोका लागि ज्यापु समाजप्रति आभारी छु । किनकी यो निम्तोमा मैले धेरै अपरिचित अनुहारको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाएँ । यही निम्तोले सुविनले धेरैको न्यानो अंगालो पाए । यस्तै यस्तै ।
This entry was posted on जनवरी 10, 2015 at 6:12 बिहान and is filed under मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.